Reer Hiiraan ayagaa xaq u leh in ay aayahooda ka tashadaan
Mohamed A Elmi, Minneapolis, MN
Bishaan 10keedii waxaa lagu qabtay shir Hoolka shirarka ee Hotel Hiiraan Beledweyne. Shirkaasi wuxuu gogol dhig u ahaa sidii maamul loogu sameyn lahaa gobolka Hiiraan. Odayaasha gobolka ayaa ku celceliyay in aysan aqbali doonin gudoomiye gobol daaqadda ka soo gala oo meel kale laga soo magacaabay illeyn tuhun ayey qabeene.
Isla maalintaa magaalo xagga koofureed ka xigta Beledweyne 245 KM, waa Jowhare waxaa ka jiray shir aan saas looga warqabin oo isna ujeedadiisu aheyd sidii maamul loogu sameyn lahaa gobolka Hiiraan.
Intuba intii ka dhaqso lehe maalintii maalintaa xigtay xukuumadda Cali Maxamed Geedi waxey ku dhawaaqday in ay godoomiye iyo gudoomiye ku xigeen u sameysay gobolka Hiiraan. Cajiib. Taasina waxey aheyd natiijadii ka dhalatay shirkii Jowhar.
Arintani waxey yaab iyo af-kala-heyn ku noqotay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Dadka Hiiraanna warkoodba daa, iyaga meeshii laga saraa dhiig ma laheyn.
Waxaa lala yaabay Hiiraan oo ahaa gobol aad looga taageersanaa dawladda sida xukuumaddu ugu dhiirratay iney ka careysiiso shacabka halkaas deggan. Dad badan ayaa xukuumadda Cali Maxamed Geedi u fasirtay qaabka ay u dhaqantay sida ninkii laantii uu geedka ka saarnaa masaarta la dhacaayay oo gooynaayay.
Waa yaabe taageerada reer Hiiraan ay siisay dawladda miyaa tolow loo fasirtay gobolka iska qaata, annagana sidaad rabtaan naga yeela. Mise si kale ayey wax isu tuseen Geeddi iyo la taliyeyaashiisu. Waase si noocee ah sida ay wax isu tuseen.
Bal inta aan mala-awaalno aan niraahno waxey arintani billow u aheyd qorshe dawladdu ay maamulo ugu dhiseyso dalka oo dhan, ugu yaraan inta iyada taageersan. Hiiraan ayaa malaha loogu horreysiiyay, kuwii kalena malaha waa ku soo daba jiraan. Wallee?
Haddii ay saas tahay maxey Madaxweynaha iyo Ra'iisul wasaaruhu uga billaabi waayeen meelaha ay iyagu deggan yihiin oo ay ka soo jeedaan, isla markaana joogaan, sida Jowhar iyo Gaalkacyo. Haddiise ay kaba billaabi waayeen maxey illaa iyo hadda ugu magacaabi la'yihiin guoomiyeyaal iyo ku xigeenadood.
Ibrahim Xabeeb oo ku jira labada gole ee dowladda, isla markaana ah dadka ka soo jeeda gobolkaas ayaa yiri "Ma ahan in aan diidanahay dadka la soo magacaabay oo runtii dadkaasi waa dad reer Hiiraan ah, waana u qalmaan booskaas. Laakiin waxa mashaqada dhaliyay waa qaabka loo soo magacaabay oo ah mid aan ka imaan dadka reer Hiiraan."
Waxaa jirta in dawladani tahay mid federal ah, isla markaana sida ku qoran axdi qarameedka ku meelgaarka ah in gobol kastaa isagu doorto dadka hogaaminaya. Sidoo kale, kulan golaha wasiirradu yeesheen ayaa Cali Maxamed Geedi ku sii xaqiijiyay in arrintaasi saas tahay iyada oo waliba dawladduna gacan ku siineyso gobollada sidii ay u dhisan lahaayeen maamul iyada oo laga soo billaabayo degmooyinka.
Waxa ra'iisul wasaaruhu ka sheegay natiijada kulanka golaha wasiiradu kal hore yeesheen iyo waxa ku qoran axdi qarameedka ku meelgaarka ah ay is waafaqsan. Dhanka kale, waxaa arintaas ka soo horjeeda oo waliba burrinya waxa dawladdu ficil ahaan u sameysay. Marka sidee rabtaa dawladdu in ay reer Hiiraan u rumeeyaan oo waxa ay sheegeyso ugu dhego laalaadiyaan.
Maaddaama nidaamka Kenya lagu sameeyey laga wado mid Dimoqraadi ah, reer Hiiraan, sida gobollada kale ee dalka, ayaga ayaa xaq u leh inay aayahooda ka tashadaan oo ay iyagu xushaan cidda ay u arkaan in ay matali karto. Midda kale, sow magacaabis ka timaada xukuumadda ma ahan waxa leysku dilayay shan iyo tobanka sano? Haddii xukuumaddu durba illowday meesha wax joogeen oo ay saas u illowshiiyo dhowdahay, dadka reer Hiiraan way xusuus badan yihiin.
Cabdullaahi Cabdi Cali (Koofi) oo ah gudoomiyaha ku meelgaarka ah ee gobolka Hiiraan oo arrintaan laga wareystay wuxuu yiri "Laad ayaan ku dhufunnay waxa ay noola yimaadeen haddii aan nahay reer hiiraan, mana yeeleyno in Jowhar nalooga soo magacaabo gudoomiye gobol". Waxa arrintaas ku raacay Dacar Xersi Xooshow oo ka tirsan odayaasha gobolka Hiiraan.
Magacaabistaan ayaa xittaa keeni kartay in dadka reer Hiiraan isku dhacaan oo dhibaato hor leh abuurto. Nasiib wanaag, inkasta oo aysan taasi dhicin, haddana xukuumaddu ma isweydiisay faa'iidada arrintaas ay iyadu ka heli laheyd. Mar kale, Koofi oo ka hadlaaya arrintaan wuxuu yiri "Bambaano ayaa nalugu soo tuuray laakiin nasiib wanaag ma qarxin" isaga oo ula jeeda in aysan reer Hiiraan xabbad isu qaadan, arintaan magacaabista awgeed.
Waxaa habbooneyd in ay dawladdu ku fara adeygto waxoogaaga taageerada ah ee ay ka heysatay gobolka Hiiraan. Laakiin, sida muuqata, waxey dawladdu u geysatay dhaawac taageeradii ay u hayeen dadka reer Hiiraan.
Arrinkaan haddii dawladdu ku adkeysato, reer Hiiraan kooley ma aqbali doonaan in gobolkooda laga maamulo, Gaalkacyo ama Jowhar. Haddii ayse qirato dawladdu in magacaabistaasi qalad ay aheyd lafteeda ayaa u baahan sidii dawladdu uga dhaadhicin laheyd sida wax u dhaceen. Arrintan ayaa reer Hiiraan ku noqoneysa mid mar walba miisaankeeda dhibeed leh.
Tii ay tiraahdaba waxaa hubaal ah in kalsoonidii shalay Hiiraan ay dawladda ku soo dhoweysay aaney maanta u heyn. Midda kale yaa aamini kara dawlad qaabkaas u dhaqmeysa haddii ay doonto berrina intey sidii oo kale yeesho ayey haddana dhihi doontaa kuuma kaseyn.
Waxaa isweydiin mudan tolow dawladdu markale ma kasban doontaa taageeradii ay dadka reer Hiiraan u hayeen? Haddii taasi dhici weydo waxaad mooddaa tiiyoo awalba naf ku celcelis aheyd in jiritaankeedu qiilqiil sii gelaayo.
Ugaaski 11aad ee Beesha Cayr oo La Caleema Saaray
�Caleemasaarka oo lagu qabtay magaalada Guriceel...
�Xisbiga S.Y.U.P oo Warsaxaafadeed kasoo saaray Qaahira
Wararka oo dhan ka akhri halkan.... Guji.. July 21